Kolaha Amaanka oo Maanta ka Xaajoonaya Eedaymo Loo Haysto Dawlada Eritrea – Rasaasa News
Kolaha Amaanka oo Maanta ka Xaajoonaya Eedaymo Loo Haysto Dawlada Eritrea
Aug 10, 2011 Kolaha Amaanka oo Maanta ka Xaajoonaya Eedaymo Loo Haysto Eritrea
New York, Aug 10, 2011 [ras] – Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay, ayaa maanta kulan xasaasi ah ka yeelanaya dawlada Eretrea, oo lagu eedeeyay in ay dhaqaale, taageera milatari iyo hoy siiso ururka Al Shabaab iyo ururo kale.
Kulanka maanta la filayo in uu ka furmo Magaalada New York ee dalka Maraykanka, waxaa ku kulmaya 15ka wadan ee ku jira Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay, waxayna falanqayn doonaan sidii wax looga qaban lahaa taageerada ay dawlada Eretrea siiso AL Shabaab.
Dooda kulanka waxaa keenay dawladaha Jabuuti iyo Ethiopia oo sheegay in dawladda Eretrea ay taageero Milatari, dhaqaale iyo hoyba siiso ururka AL Shabaab oo dagaalo xooggan ka wada dalka Somaliya, dilal badana u gaystay ciidamada AMISOM ee jooga Muqdisho. Waxaa kale oo ay ku eedeeyeen Eritrea in ay manaanaday bisha January ee ina dhaaftay qaraxyo lala damacsanaa in laga sameeyo kulankii Midowga Afrika uu ku lahaa Magaalada Addis Ababa.
Takeda ALemu oo ah danjiraha dawladda Ethiopia u jooga Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay, waxaa uu sheegay in dawlada Eretrea ay dhaqaallo siiso Aargigixisada geeska Afrika ee Al Shabaab sida uu sheegay. Danjiruhu, wuxuu intaa ku daray in Eretrea ay khatar wayn ku tahay amaanka gabalka geeska Afrika oo hadii ayna Golaha Amaanku arintaas waxba ka qaban ay keeni karto dhibaato baaxad leh.
Dhinaca kale Masuuliyiin u hadashay Maamulka Obama, waxay ugu baaqeen dawlada Eretrea in ay joojiso taageerada ay siiso Al Shabaab, hadii kale ay cawaaqib xumo kala kulmi karto.
Ugu dambeyn kulanka oo ah mid xasaasi ah, ayaa la filayaa in ay ka soo baxaan qodobo ay ku jirto in cuno qabatayn hor leh la saaro Eretrea, sida ay sheegeen xubno ka socda Wadamada Ethiopia iyo Jabuuti.
Jwxo-shiil, oo Qaxootinimo ka Codsaday Dalka Australia